IMacOS ePhakamileyo yeSierra ngoku iyafumaneka ukukhuphela | Iindaba zeGajethi
Inguqulelo entsha yenkqubo yokusebenza yeeMacs, iMacOS ePhakamileyo yeSierra, ilapha iyafumaneka ukhuphelo simahla ngokupheleleyo nangonaphakadeHayi kunyaka wokuqala owenziwa nguMicrosoft xa isungula Windows 10, inkqubo yokusebenza yokuba kunyaka emva kokumiliselwa kwayo inexabiso elingaphezulu kwe-100 euro.
Enye yeenoveli eziphambili ezisinika iMacOS ePhakamileyo yeSierra inxulumene nenkqubo yefayile ye-APFS, Inkqubo entsha yefayile ehambelana kuphela ne-SSD hard drive kwaye oko kunyusa ngokubonakalayo isantya kunye nokusebenza kwe-Mac yethu kwaye ngenxa yoko inkqubo yokusebenza.
Le nkqubo yefayile ikwafumaneka kwi-Apple iOS mobile ecosystem ukusukela kwinguqulelo 10.3.3. Ezinye izinto ezinqabileyo kolu hlobo lwamva nje lweMacOS ePhakamileyo yeSierra zinokufumaneka kwimeko yokuziqhelanisa nendlela iS Safari esebenza ngayo, isivumele vimba ii-cookies, ukudlala ngokuzenzekelayo kwevidiyo, ukwandisa iphepha lewebhu esifuna ngokungagqibekanga nanini na xa sibavakashela ...
Umbono wokufunda eSafari lolunye uphuculo olufunyenwe ngumkhangeli we-Apple, esivumela Sebenzisa olu luvo nanini na xa undwendwela iphepha lewebhu ngokukodwa, ukuba nje iyahambelana. Olunye uphuculo oluziswe yiMacOS ePhakamileyo eSierra zezi zilandelayo:
Isicelo seMeyile sendalo ngoku I-30% ngokukhawuleza kwaye isivumela ukuba senze uphando ngendlela efanelekileyo ngakumbi.
Siri uye walilungisa ilizwi lakhe Ukongeza ukubonisa oopopayi ngalo lonke ixesha silisebenzisa.
Inkqubo yeefoto ivumela ukuba sikwazi ukungqamanisa ubuso esele sichonge kwisixhobo sethu se-iOS, ke kulula kakhulu ukukhangela ngabantu. Esi sicelo sikwasivumela ukuba sihlele iifoto ngokuthe ngqo ngoku.
Njengohlobo lwenqaku lwe-iOS, uguqulelo lweMac nalo ivumela ukuba senze iitafile.
Ukuba senza i bamba umnxeba ngeFaceTime, I-interlocutor iya kufumana isaziso ukuze bazi ukuba umfanekiso wabo ubanjiwe, umsebenzi osinikwa nguSnapchat.
Ibha esecaleni yokuFumana, apho uqhuba khona kunye neefolda ozithandayo ngoku ilungisiwe kwaye ayinakususwa okanye ifihlwe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Iikhompyuter » IMacOS ePhakamileyo yeSierra ngoku iyafumaneka ukuze ikhutshelwe